Butterfly Staxx mumwe yakanakisisa Mobile cheap car insurance paIndaneti mutambo inobva dingindira akanaka zvakasikwa uye zvisikwa zvayo. In mutambo uyu, ndizvo zvose pamusoro maruva mavara akanaka uye kungozvifunga. Game iri dzinofambiswa ne Gwenzi shanu uye makumi mana betways kukubatsira kuita chiratidzo zvisamumirira combos. The Gwenzi vari wokumubatsira colour ane husinganzwisisiki rwizi wakakomberedzwa nemakomo, uswa nemiti. A muti pamwe söpö dzepepuru nemaruva anotarisa ukwezve zvikuru pasi denga nyeredzi inopenya manheru. A mesmerizing yokufungisisa mimhanzi nguva dzose muchinangwa kumashure kuti inonzwika chete mashiripiti. The vachitamba munzvimbo mutambo uyu rinotanga £ 0,20 uye kufadza yakaiswa panguva panogumira £ 400 kuruka
Pamusoro yokuvaka kuti Butterfly Staxx
Izvi zvinoshamisa music yakanakisisa Mobile cheap car insurance paIndaneti mutambo yakanga yakataurwa mumwe kupfuura NetEnt. A zita nevakawanda kuti paIndaneti varaidzo kuburikidza playing mitambo uyewo kubatsira vatambi kuhwina monies. Vakanga vauya ane akapfuma ruzivo angasvika maviri emakore ari indasitiri iri akavaita mwene unyanzvi slots uchitamba mutambo wacho.
Pane mavara zviratidzo izvi yakanakisisa Mobile cheap car insurance paIndaneti mutambo kuti kuita Gwenzi tarisa chaizvo. Kune tsvuku, pingi uye Violet nemaruva pamwe yemandorokwati yakajeka shavishavi kuti unoripa chikuru mubayiro 60x pamusoro bheji rako. The ruva zviratidzo kubhadhara 40x neimwe kana shanu zviratidzo zvavo kuoneka ari payline. Unogonawo kuona zviratidzo kutamba makasa kubva Jack kuti Ace. Pane zvakawanda ruva zviratidzo zviviri kuti akubatsire kukunda kubva bhonasi zvinhu. Ivo elavender wechitema ruva uye mumwe nomumwe mavara akawanda pamusoro petals.
Wild Symbol: The ruva pamwe siyana petals ndiyo mhuka uye vakafukidza vose nechepasi zviratidzo akanomira pamusoro paradzira. Kunenge ose Gwenzi uye kunokubatsira kuti kunowedzerwa mubatanidzwa.
Muparadzire Symbol: Lavender ruva chiratidzo ndiyo paradzira kuchiitwa ichi yakanakisisa Mobile cheap car insurance paIndaneti mutambo. With matatu kana kupfuura nechitarisiko chiratidzo ichi, unogona kukunda mashanu vakasununguka kuruka nomwe. Munguva Muruoko rwake anobata chirukiso izvi, unogona chete kutarisira nhumbana zviratidzo kuoneka. Chii unofanira kutsvaka ndivo anopenya ndivo vanodzorera kupinda kungozvifunga achibhururuka kuruboshwe vakawanda Gwenzi. Vakarambira zvavo namuka kusvikira pakupera Muruoko rwake anobata chirukiso zvose, kukupai richakunda mubatanidzwa payouts havo.
Ane mashiripiti dingindira uye mavara Graphics, ichi yakanakisisa Mobile cheap car insurance paIndaneti mutambo anopa mikana siyana unogona kukunda kubva.
Jackpot Total £187199.77
Jackpot Total £87774.23
Jackpot Total £42137.39
Jackpot Total £15020.65
Jackpot Total £9777.00
Jackpot Total £9119.70
Jackpot Total £7523.83